Madaxweyne Farmaajo oo saraakiisha ciidamada kulan kula yeeshay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo saraakiisha ciidamada kulan kula yeeshay Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo saraakiisha ciidamada kulan kula yeeshay Muqdisho. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah saraakiisha ciidamada kulan kula yeeshay gudaha Muqdisho.
Kulanka ayaa diirada lagu saaray arrimaha ammaanka , sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Madaxweyne Farmaajo ayaa saraakiisha u jeediyay in ammaanka caasimada Muqdisho la adkeeyo si looga hortago weerarada maleeshiyada Al-Shabaab.
Kulanka ayaa kusoo aadaya maalin kadib markii gaari qarax uu ka dhacay Muqdisho, oo ay ku dhinteen ku dhawaad toban qof.